Markab waday Kiimiko oo lagu afduubtay Xeebaha Soomaaliya. - Awdinle Online
Markab waday Kiimiko oo lagu afduubtay Xeebaha Soomaaliya.
March 10, 2020 (Awdinle Online) –Kooxaha Burcad Badeedda Soomaalida ah ayaa gacanta ku dhigay Markab waday 2 Milyan Barmiil oo ah Kiimiko kaas oo ku safraayay xeebaha Soomaaliya.
Wargeyska newsthump,oo warkaan qoray ayaa sheegay in Kiimikada dareeaha ah ee uu wado Markabka ku sii jeeday Dalka UK qiimaheedu gaarayo Lix Bilyan oo Lacagta UK ah.
Kooxda Burcad Badeedda ah ee weerarkan geystay ayaa sheegay in ay madax furasho ahaan u doonayaan 50 Milyan oo Pound-ka Ingiriiska ah.
Afhayeen u hadlay Dowladda UK ayaa sheegay in aysan u furneyn fursad kale oo aan ahayn in ay lacagta bixiyaan wadaxaajoodna la galaan kooxaha Burcad Badeedda ee Markabkaas ku heysta Xeebaha Soomaaliya.
Markabka ayaa wada Kiimiko Dareere ah nooca loo yaqaan hydro-alcoholic, waxaa kale oo Markabka saaran agabka loo adeegsado Musqulaha iyo 50,000 oo maasgarada laga xirto Caabuqa Karoonaha ee hadda ku faafaya Caalamka.
Dowladda UK afhayeenka u hadlay ayaa sidoo sheegay in ay isla galabta wareejin karaan lacagta ay sheegteen Burcad Badeedda marka loo barbar dhigo baahida ay u qabaan Maasgarada iyo Kiimikada kale ee lagu dhaqo Gacmaha si looga dilo jeermiska.
Ciidanka gaarka ah ee UK ee loo yaqaano SAS ayey dowladdu sheegtay in loo dirayo Xeebaha Soomaaliya sidoo kalena Markab ay UK leedahay oo ku sugan Biyaha Gacanka Cadmeed uu howlgal billaabayo.
Previous articleKheyre oo xariga ka jarey Garoonka diyaaradaha degmada Baraawe
Next articleDaahir Ciirro. “Mid baa lagu Xalin kara Khilaafka DF & Dowlad Goboleedyada waana dhisada Maxkamadda Dastuuri ah”